Nampiasainy hatramin’ny laharana fiarakodian’ny zandary… : tratra ilay zandary sandoka, nitondra rongony 20 gony | NewsMada
Nampiasainy hatramin’ny laharana fiarakodian’ny zandary… : tratra ilay zandary sandoka, nitondra rongony 20 gony
Saron’ny polisy tao amin’ny barazy ao Ihosy, omaly maraina ny fiara 4×4 iray nampiasa an-tsokosoko ny laharana fiarakodia an’ny zandary. Rongony 20 gony no hita tao anatin’ilay fiara nentin’ny lehilahy iray nisandoka ho zandary sady nanao fanamiana sy galona zandary…
Voalazan’ny tatitra avy amin’ny sampandraharaha misahana ny serasera eo anivon’ny zandarimariam-pirenena, fiara sivily iray nampitondraina ny laharana Z 5160 (laharana izay ampiasain’ny groupement-n’ny zandarimariam-pirenena Androy any Ambovombe) no saron’ny polisy nitatitra rongony 20 gony tao Ihosy, omaly maraina. Lehilahy iray nisandoka ho zandary sy nanao fanamiana niaraka tamin’ny galona zandary no nitondra ilay fiara. Notazonin’ny polisy avy hatrany ireo olona telo tao anatiny ka vehivavy ny iray ary efa mandeha ny famotorana azy ireo momba ity raharaha ity.
Niantso ny zandary ao Ihosy ny polisy mba hanamarinana ity tranga ity ka fantatra taorian’ny fanadihadiana rehetra fa laharana sandoka no nampiasain’ilay mpamily hanaovany ny asa ratsiny. Nohamafisin’ny tatitra avy amin’ny zandarimariam-pirenena hatrany fa laharana sandoka no nampiasain’ilay mpamily nanaovany ny asa ratsiny tamin’ny fitaterana ireo rongony ireo fa tsy fiara an’ny zandamariam-pirenena fa fiara sivily. Manaporofo izany ny laharana ao anaty carte grise ary hafa ny mipetaka eo amin’ny fiara, hoy hatrany ny fanazavan’ny lehiben’ny sampandraharaha misahana ny serasera eo anivon’ny zandarimariam-pirenana.
Voamarina tao anatin’ny fanadihadiana fa zandary efa voaroaka tamin’ny taona 2010 (decision N°391-Com/4DRH/PSO, tamin’ny 22 septambra 2010) io mpamily io noho ny fanaovana asan-jiolahy sy fanafihana ka naiditra am-ponja teny amin’ny fonjaben’i Tsiafahy, kanjo tratra nanohy ny asa ratsiny indray.
Manamboninahitra zandary ny tompon’ilay fiara…
Manamboninahitra ambony eo anivon’ny zandarimariam-pirenena ihany ny tompon’ilay fiara 4×4 ary zokin’ilay mpamily nisandoka ho zandary ihany, araka ny fanazavana voaray. Efa nandray ny fepetra rehetra amin’ny handefasana azy any Ihosy hanaovana fanadihadiana ny tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny zandarimariam-pirenena.
Misy, araka izany, ny fanadihadiana miaraka iarahan’ny polisim-pirenena sy ny zandarimariam-pirenena amin’ity raharaha ity. “Ao anatin’ny fangaraharana tanteraka no ilazanay fa tsy handefitra fa handray ny andraikitra manandrify izay mety ho fandikan-dalàna rehetra hita amin’izao raharaha izao ny zandarimariam-pirenena ka hanao ny fampiharana ny lalàna araka ny lalàna famaizana sy ara-pitsipi-pifehezana raha misy andraikitr’io ambony io amin’izao raharaha izao”, hoy ny tatitra voaray.
Midika izany fa tena hanadio tanteraka ny lamba malotony ireo tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny zandarimariam-pirenena. Nohamafisin’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena, ny Jly Andriamahavalisoa Girard rahateo izany fa tena hisy ny fandraisana andraikitra amin’ny fanadiovana anatiny eo anivon’ny zandarimariam-pirenena